Vacos Baby Monitor, famakafakana ary fampisehoana | Vaovao Gadget
Rafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | Nohavaozina amin'ny 31/08/2021 23:50 | hevitra
Miverina ao amin'ny Actualidad Gadget izahay famerenana ho an'ny fianakaviana, manokana ho an'ireo fianakaviana misy zazakely. Tonga teo amin'ny fiainantsika ny teknolojia mba hahamora antsika. SY ho an'ny ray aman-dreny manan-janaka ao an-trano, kely ny fanampiana rehetra. Androany dia miresaka momba ny Fanaraha-maso zaza tsy misy dikany, fakantsary premium mba tsy hahavery antsipiriany ny kely indrindra amin'ny trano.
Misy ny azo atao tsy manam-petra eny an-tsena rehefa mitady fakan-tsary fanaraha-maso zaza. ankehitriny Lazainay anao rehetra ny tolo-kevitr'i Vacos. Fakan-tsary fiarovana feno ho an'ny fehezo ny zaza amin'ny horonan-tsary, feo, fahitana amin'ny alina ary maro hafa noho ny hafa dia mahavita manolotra.
1 Vacos Baby Monitor, azo antoka ny zanakao
3 Famoronana fakan-tsary sy efijery
4 Vacos Baby Monitor endri-javatra
4.1 Voafehy ny zava-drehetra "
5 Tombontsoa sy lafy tsaran'ny Vacos Baby Monitor
Vacos Baby Monitor, azo antoka ny zanakao
Mijery ny endrika ivelany, ny fakantsary Vacos Baby Monitor, dia mitovy amin'ny fakantsary fiarovana hafa fa afaka nanaporofo izahay. Fakan-tsary natao ho an'ny fanaraha-maso hafa, toy ny tranontsika na ny orinasanay. Na dia mijery aza isika Amin'ny tombony azony dia ahitantsika fahasamihafana lehibe. Io ve ilay mpanaraha-maso zaza notadiavinao? Raiso io Fanaraha-maso zaza tsy misy dikany amin'ny tranokala ofisialy amin'ny vidiny tsara indrindra.
Azontsika atao ny milaza fa tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika io horonantsary mihidy satria manana mpampita horonantsary, fakantsary ary mpandray fantsona izahay, toy ny efijery, misy azy ireo ny fanaraha-maso ilaina amin'ny fikirakirana sy ny fampiasana azy. Fihodinana azo antoka 100% ary afaka amin'ny hacks mety.
Izao no fotoana hijerena ao anaty vata misy an'io "kit" fanaraha-maso zaza io. Araka ny efa hitantsika dia mahita singa roa lehibe toy ny ny fakan-tsary mihitsy, amin'ny fotsy sy vita amin'ny plastika misy famaranana gloss. Ary ny manara-maso amin'ny efijery ary bokotra fanaraha-maso.
Manana singa fototra hafa koa izahay hampiasaina toy ny telegrama. Manana tariby izahay ankehitriny ho an'ny fakantsary, ary iray hafa ho an'ny famahana bateria manara-maso Samy miaraka USB Type-C endrika. Ary koa adaptatera herinaratra roa ho an'ny tariby tsirairay.
Alefaso eto ny Fanaraha-maso zaza tsy misy dikany amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny tranonkala ofisialy
Farany, mahita a kojakoja izay hampiasaina handefasana ny fakan-tsary amin'ny rindrina mifantoka amin'ny toerana mety amintsika. Ankizy kely antsipirihany haingon-trano manome endrika fakan-tsary amin'ny fakantsary azontsika apetraka eo amboniny; tsiroaroa amin'ny tandroka mavokely sy mavo. Ary toy ny mahazatra, a torolàlana kely ho an'ny mpampiasa sy antontan-taratasy fiantohana ny vokatra.
Famoronana fakan-tsary sy efijery
Araka ny efa nolazainay, ny fakantsary dia azo tsaboina tsara amin'ny iray amin'ireo fakantsary fanaraha-maso izay azonay nosedraina. Manana a fotodrafitrasa misy sisiny boribory iray hafa izay ampidirina ilay solomaso. Nefa mbola hitantsika ihany singa manavaka azy, toy ny antena, na ny fahafaha-manaingo azy manokana amin'ny kojakoja haingo sasany izay tafiditra ao anaty boaty.
endri-javatra mikrô ary koa misy mpandahateny, koa ampitaina miaraka aminy feo bi-directional. Tsy isalasalana fa tena ilaina tokoa ny afaka mifandray amin'ny zaza amin'ny fotoana rehetra raha mifoha izy na raha te hiresaka aminy amin'ny fanamafisam-peo isika hampitony azy. Ny solomaso dia misy ny vahaolana HD 720P ary miaraka a fahitana amin'ny alina tena tsara izay manome sary maranitra amin'ny jiro misy, na tsy eo tanteraka.
El Monitor izay mifehy ny fakan-tsary dia manana Efijery LCD 5 santimetatra. Eo aloha, a la derecha amin'ny efijery dia hitantsika ny bokotra ara-batana izay mifehy ny fampiasan'izy ireo.
Ao amin'ny aoriana, miampy a volomaso inona no mandeha hahafahantsika mitazona azy, hitantsika Antenna ka ny mari-pamantarana dia avoaka sy raisina miaraka amin'ny mazava kokoa. Eo ambany manana a slot karatra fahatsiarovana fahatsiarovana hatramin'ny 256 MB izay ahafahantsika mitahiry ireo rakipeo.
Vacos Baby Monitor endri-javatra
Fotoana izao hilazana aminao ny antony lehibe mahatonga ity Vacos Baby Monitor ho safidy tsara indrindra eny an-tsena hanapahana hevitra momba izany. Araka ny efa nolazainay taminao, ny famolavolana, na dia mitovy amin'ny fakantsary fanaraha-maso "normal" aza, dia manintona, maoderina ary tsy hifandona amin'ny toerana rehetra izany.
Misaotra ny menio monitor afaka manana fanaraha-maso ilaina mora foana isika mba hitrandrahana tsara amin'ny fampiasana azy. Miaraka amin'ny bokotra mivantana, hainay alefa na alao ny fakantsary, na mikrô hiresaka amin'ny zazakely na afaka handre raha mitomany ilay zaza. Miaraka amin'ireo bokotra ao amin'ny faritra afovoany azontsika atao ny mamadika ny fakantsary hatramin'ny 355 degre ary mamindra azy hatramin'ny 55 degre amin'ny fihodinana. Azontsika atao koa ny manamboatra sary miaraka amin'ny bokotra afovoany miaraka 1,5X zahao hatramin'ny 2X.
Tsy azo atao ny mahita fiafarana tsy fisoratana anarana ny Monitor Monitor Baby antsika. Miaraka amin'ny monitor afaka mampifandray fakan-tsary 4 samihafa isika afaka mifehy amin'ny fomba mitovy isika. Amin'izay isika dia hanana sary isaky ny zoron'ny efitrano fandriana amin'ny efitrano tianay hapetraka. Ny fiarovana rehetra tadiavinao ao anaty fitaovana iray, sy izany afaka mividy izao ianao ao amin'ny tranonkala ofisialiny.
Voafehy ny zava-drehetra "
Sela Mpandray Hafanana miaraka amin'ny fakantsary ataovy feno kokoa sy miasa io 100% hanomezana antsika traikefa feno. Manana a sensor sensor izay hampifoha ny mpanara-maso ary andao hojerentsika raha nifoha ilay zazakely na mandeha fotsiny mandritra ny torimaso. Toy izany koa, ny sensor sensor hanetsika ny fakantsary sy hanara-maso raha mitomany ilay zaza.
Iray amin'ireo ireo sensor izay mampiavaka ny Vacos Baby Monitor amin'ny sisa amin'ireo safidy hafa dia ny mari-pana. Ny fakan-tsary dia afaka manome antsika vaovao momba ny mari-pana amin'ny efitrano. Amin'ity fomba ity dia ho fantatsika amin'ny fomba tsotra raha ilaina ny mametraka hafanana na ny mifanohitra amin'izay, fa avo ny mari-pana.
Ny Vacos Baby Monitor dia manana ny mety handraisana sary. Tsy manolotra antsika fotsiny izy io fampitana mivantana, raha tiantsika dia afaka mampiditra a Karatra Micro SD hatramin'ny 256MB raha tehirizina amin'ny horonan-tsary. Hanana famantarana mazava sy tsy voapaika isika miaraka amin'ny a elanelana hatramin'ny 300 metatra manomboka amin'ny fakantsary mankany amin'ny monitor, afaka mivezivezy ao an-trano isika tsy misy olana.
Ny antsipiriany iray manan-danja dia ny Vacos Baby Monitor tsy mila ilay smartphone, noho izany tsy mila mametraka rindranasa izahay. Sady tsy ilaina ny fifandraisana Internet raha hampiasaina, ny famantarana navoakan'ny fakan-tsary dia tsy hitan'ny maso fotsiny. Raha tsy misy Apps na Internet, afaka amin'ny hackers ny sarinay.
Tombontsoa sy lafy tsaran'ny Vacos Baby Monitor
El 5 santimetatra haben'ny efijery ary ny famahana ny 720p
tsotra de utilisation hatramin'ny fotoana voalohany sy ny fahaizan'ny safidy
Sela Mpandray Hafanana, feo, fihetsehana ary mari-pana
Raha tsy misy Internet indraindray ny maritrano ny trano afaka mametraka sakana sasany
vidiny avo kokoa noho ny salanisa
Tsy misy wifi
Fanaraha-maso zaza tsy misy dikany
Famerenana ny: Rafa Rodríguez Ballesteros
Navoaka tamin'ny: 1 Septambra amin'ny 2021
Fanovana farany: 31 Aogositra 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Vacos Baby Monitor, famakafakana ary fampisehoana
Kitendry HyperX Alloy Core sy totozy Pulsefire Core, mpiara-milalao tonga lafatra [SWEEPSTAKES]